Nyocha nke Amazon Echo Plus, akpaaka ụlọ na ike ụda kacha mma | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe ị rutere Spen, ọ nweghị onye ga-agọnahụ nke ahụ Alexa a bụ afọ dị anya site na ụfọdụ ndị isi na asọmpi na Spain. Ihe niile ga-kwuru, Alexa ka nwere ogologo ụzọ na-aga na Spain, ma dị ka anyị na-agwa gị dị n'aka onye ọ bụla na-asọmpi. Ma mgbe nkowa a dị mkpirikpi, anyị ga-aga n'ihu na nnwale anyị nke ndị niile na-ekwu okwu nke mejupụtara ọnụ ọgụgụ Amazon Echo, ndị ama ama ama ama ama nke Amazon.
Ma eleghị anya Ọtụtụ obi abụọ ị na-enwe mgbe ị na-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ nwere Amazon Echo Plus dị ka onye protagonist, ọkà okwu kachasị elu nke ezinụlọ Amazon Echo ezinụlọ, yabụ ka anyị nwaa ya iji nwaa iwepụ obi abụọ gị ... Mgbe ịwụchara, anyị na-enye gị nkọwa niile nke ihe ọhụụ Amazon Echo Plus a dị ka, Onye nnochita onu ahia nke Amazon, ọkà okwu na na-ezochi ihe karịrị nnọọ ihe ọkà okwu pụrụ inye anyị na otu ọnụahịa ...
Dị ka ndị niile na-ekwu okwu na Amazon ikwughachi ezinụlọ, na Amazon Echo Plus na-egosi anyị mgbanaka na-enwu gbaa n'elu, mgbanaka a na-egosi anyị ọnọdụ nke Alexa, inwe ike lee anya nke oma ebe Alexa na achoputa anyi mgbe anyi na agwa ya okwu (Ke mbiet n'elu ị pụrụ ịhụ mpaghara nke Mkpa ọkụ-acha anụnụ anụnụ na-egosi na anyị na ọnọdụ na-akwanyere ndị Amazon ikwughachi Plus). N'adịghị ka Amazon Echo Dot, na nke a anyị nwere igwe okwu 7: Igwe okwu 6 nke iji jiri Alexa na-ekwukọrịta, yana igwe okwu na-akagbu mkpọtụ mgbe anyị na-akpọ egwu ma anyị chọrọ ịgwa Alexa.
Amazon ikwughachi Plus nwere a siri ike imewe, na-echetara anyị HomePod Apple na-echekwa ebe dị anya. Akara profaịlụ, enweghị mgbasa ozi, yana ibu dị mma nke na-ezobe ọkà okwu 76mm woofer na 20mm tweeter. A karịa ihe a na-anakwere nke jupụtara na ime ụlọ dịka ime ụlọ gị na enweghị nsogbu, emesịrị m ga-alọghachite esemokwu nke ụda ...
1 Ngwaọrụ na-eme ka ụlọ anyị mara ihe
2 Amazon ikwughachi vs Amazon ikwughachi Plus
3 Ebee ka ịzụta ọhụụ ọhụrụ Amazon Echo Plus?
Ngwaọrụ na-eme ka ụlọ anyị mara ihe
Akụkụ na-akpali mmasị nke Amazon Echo Plus bụ na n'ime ya nwere njikwa ụlọ dijitalụ na teknụzụ Zigbee (na mgbakwunye na temometa ọ na-eji maka arụmọrụ akpaaka ụlọ). Inwe Zigbee technology na-eme ka a ọhụrụ Amazon ikwughachi Plus ike nke na-achịkwa ngwaọrụ ọ bụla na anyị nwere n'ụlọ anyị, na nke kacha mma n'ime ya: ọ dịghị ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ àkwà mmiri, ya bụ, anyị na-ezere ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ.
Smart thermostats, smart plọg, ma ọ bụ ama Phillips Hue bulbs, ma ọ bụ ọbụna ndị si Ikea, dakọtara na Amazon ọhụrụ a Echo Plus. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ akụkụ dị iche iche, ma ọ bụrụ na ị na-eche ịbụ ezigbo freaks nke ngwaọrụ ndị amamịghe, egbula oge inweta Amazon Echo Plus a. Ihe e ji mara ya bụ nke ahụ Amazon na-eji bọlbụ Phillips Hue azụ ya, ma cheta: ị gaghị achọ akwa akwa Phillips Hue.
Isi ihe ọzọ na-amata banyere nke a Amazon ikwughachi Plus bụ na nke a minijack n'ọdụ ụgbọ mmiri na anyị na-ahụ na azụ nwere ike ahazi dị ka ọdịyo ọsọ ọsọ ma ọ bụ mmepụta, na ndị ọzọ na-ekwu okwu Amazon ọ nwere ike iji ya dị ka mmepụta ụda, na nke a anyị nwekwara ike ijikọ ọkpụkpọ ọ bụla site na minijack ma jiri Amazon Echo Plus dị ka ọkà okwu (site na Bluetooth, a pụrụ iji onye ọ bụla na-ekwu okwu Amazon mee ihe dị ka mpụga ọkà okwu).
Amazon ikwughachi vs Amazon ikwughachi Plus
Na nne nke obi abụọ nile, Amazon ikwughachi Plus ma ọ bụ Amazon ikwughachi? Ihe niile dabere na mkpa gị, ma ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ọkà okwu nke ị ga-eji na-ege egwu gị ma jiri Alexa dị ka onye inyeaka iji nye gị ihe ncheta wdg ... enweghi otutu ihe di iche na olu nke otu na nke ozo.
Amazon ikwughachi Plus, dị ka m kwuru, bụ naanị otu n'ime nso nwere nke dijitalụ ụlọ njikwa, nke a bụ isi ihe dị iche. Eeh, o nwere igwe okwu kariri Amazon ikwughachi, ma anyi na ekwu maka ufodu obere ndị ọkà okwu na-anaghị eme ọdịiche dị n’etiti otu ụda na nke ọzọ. Nhọrọ maka ọdịnihu na-abịakwutekwa m, mana anyị amatala taa na anyị enweghị ike ịkọwa na Amazon agaghị emegharị ndị ọkà okwu site na ịhapụ ọhụụ ọhụụ na obere oge.
Ebee ka ịzụta ọhụụ ọhụrụ Amazon Echo Plus?
Olee otu o si di obere, Nwere ike nweta nke a Amazon ikwughachi Plus na Amazon (Worth the redundancy), anyị amaghị ma ọ bụrụ na a ga-ere ya n'ụlọ ahịa nkịtị mana ka ị nwere ike ịma, ịzụta na Amazon dị mfe. Nweta njikọ ndị a: Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla., ị nwere ike nweta okwu Amazon Echo Plus na Philips Hue White bulb bulb nwere oghere E27 yabụ ị nwere ike nweta sistemụ zuru oke.
Ihe ngwugwu ga - enwe ego nke euro 169,08, ma ekele mwepụta nke Amazon ikwughachi nso nke okwu na Spain, ugbu a ị nwere ya na a ọnụahịa nkwado nke euro 89,99, ezigbo ọnụahịa mara mma na-atụle na anyị were okwu okwu okwu kachasị elu nke Amazon, yana bọlbụ smart a bụ nke kachasị mma n'ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịwụli ndị na-enyere olu okwu maka ụlọ ahụ, egbula oge iji ohere ndị a na-enye Amazon na ndị na-ekwu okwu Echo.
Amazon ikwughachi Plus
Onye edemede: 30%
Onyinye gụnyere bọlbụ Phillips Hue
Zigbee processor ịchịkwa smart ngwaọrụ
Ọdịnaya ụda n'ihi nha
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị njọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Ndị na-ekwu okwu » Nyocha nke Amazon Echo Plus, akpaaka ụlọ na ike ụda kacha mma